I-ertyisi ngebhatata ebomvu kunye nebhekoni | Ukupheka kweKhitshi
I-ertyisi ngeebhatata ezigcadiweyo kunye nebhekoni
Ekhaya siqhele ukutya ii-ertyisi phantse veki nganye. Sisoloko sizilungiselela ngendlela efanayo ngokwahluka okuncinci. Kutheni usenza utshintsho kwezinye izinto zakudala ertyisi kunye ham Kuyasinceda ukuba singadikwa etafileni. Ewe, ikwa negalelo ekwenzeni iinguqulelo ezilula ezinje ngale ertyisi ngebhatata ebisiweyo kunye nebhekoni.
Ibhatata egcadiweyo kukuhambelana okugqibeleleyo nee-ertyisi. Inika esi sidlo isichukumiso esimnandi esihlala sinomtsalane kum kwaye esahluke ngokugqibeleleyo kukuchukumisa okunetyiwa kwebhekoni. Siphinde songeza itswele, kuba itswele lihlala lidityaniswa.
Ufuna ukuphinda wenze esi sidlo? Ukwenza njalo kuya kuba lula kakhulu kuwe. Uluhlu lwezithako lincinci kwaye ubukhulu be iresiphi ilungiselelwe kwisiqingatha seyure. Ngelixa iitapile zipheka eziko, uya kuba nexesha lokufumana ezinye izithako zilungile. Yijonge!
1 itswele, julienned
Iilayi ezi-2 ezingqindilili zebhekoni
1 ibhatata ephakathi
50 ml. ioli yeoli yomnquma eyongezelelweyo
Sitshisa i-oven ukuya kuma-220ºC.
Nje ukuba ugqibile, sidibanisa ioyile kwikomityiityuwa kunye ne-paprika yokuxubha ibhatata.
Emva koko, siyaxobula iitapile kunye sika kwiisilayi ezi-2 cm. zingqindilili ukuba sibeka kwitreyi yokubhaka, kwiphepha lesikhumba.
Bhrasha ngomxube esiwulungisileyo njengamaqebengwana eebhatata Sibhaka imizuzu emi-20 okanye kude kube yithenda kunye nemiphetho igolide kancinane.
Ngelixa izilayi zeetapile zosiwa, kwi-skillet fakela itswele imizuzu eli-15 eneepuni ezimbini zeoyile.
Ngexesha elifanayo, epanini kunye namanzi kunye netyuwa masipheke ii ertyisi Imizuzu esi-8 okanye bade babenendawo oyithandayo.
Ke sidibanisa ibhekoni ecoliweyo okanye uphonsa ipani nge-anyanisi kwaye usose imizuzu embalwa. Ukugqiba, yongeza ii-ertyisi eziphekiweyo kunye neentlanzi, kwaye udibanise ubushushu.
Okwangoku siza kuba nazo zonke izithako ezikulungeleyo Nyusa isitya. Beka izilayi zeetapile emazantsi kwaye ngaphezulu kwawo itswele, ibhekoni kunye nee-ertyisi umxube
Okokugqibela naphambi kokuba sikhonze ii-ertyisi ngebhatata ebisiweyo kunye nebhekoni, sidibanisa ipepile entsha
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Iiresiphi zemifuno » I-ertyisi ngeebhatata ezigcadiweyo kunye nebhekoni
Iitapile ezinencasa zeChorizo
Iimbotyi eziluhlaza kunye netswele kunye neham